Wejiga kaliya ee Wajiga Mashiinka Mashiinka & iibinta nooca naxaasta ah ama aluminium
Mashiinka bilawga wejiga kaliya ee qiimaha ugu wanaagsan iibka ah
Qiimaha Gawaarida Marxaladaha ah, Jumladleyda & Bixiyaasha
Ujeedada guud ee matoorka dhalinta AC
Qiimaha ugu wanaagsan ee hal mar laba-capacitor induction motor
Motors Wajiga Labaad Wareegayaasha
Noocyo badan oo kaladuwan oo ah xulashooyinka wajiga qaadashada
Waxaa jira dhowr nooc oo matooro hal waji ah. Mashiinka Halbeegga Marxaladda Hal Mar wuxuu ka kooban yahay weji keliya oo fuulid ah kaas oo lagu rakibay mashiinka mootada iyo qafis qafis lagu dhejiyay rotorka Mashiinka Wajiga 'Split Phase Motor' waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Motor Start Resistance'. Crompton Greaves 1 HP 0.75 kW 2 Pole Flange oo lagu rakibay Capacitor Start Induction Run AC Mootada
Waxaan bixinaa alaab tayo sare leh, qiimo jaban. Mashiinka-cirifka-cirifka ayaa ah nooca asalka ah ee AC-ga wajiga halbeegga ah. Qaybo ka mid ah dib-u-celinta ayaa bilaabaya matoor induction Lumated stator core.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku caawinno! Adeegyadeenna macaamiisha ayaa laga heli karaa 24 saac khadka tooska ah. Markaan soo bandhigno alaab wanaagsan, waxaan qaban doonnaa shaqadeena adeegga.
Waxaan leenahay koox adag, koox cilmi baaris ah oo cilmi baaris wanaagsan leh, iyo koox wanaagsan iibka kadib. Mashiinka kiciyaha-bilawga-soosaarida wuxuu soo saaraa jawi magnetic oo ka roon matoorrada kala-gooska ah.
Alaabooyinka Noocayaga ah
Waxaa jira saddex nooc oo matoorrada duritaanka hal mar ah
Kala firdhiso awood xoogagga faras
Mashiinka Halbeegga Marxaladda Hal Mar wuxuu ka kooban yahay weji keliya oo fuulid ah kaas oo lagu rakibay mashiinka mootada iyo qafis qafis lagu dhejiyay rotor-ka. 5kw hal wajiga matoorka tayada Seiko, alaabada la iibiyay waa dhamaan gariiradda naxaasta, kor u kaca heerkulka hooseeya, nolosha dheer; 2hp 240v wajiga korantada korantada mashiinka saxda ah ee sarreeya, jitter yar, hawlgal xasilloon; cufnaanta sare ee saxsanaanta saxda ah, xirato adkaysi, ac induction motor, 1 hp qiimaha gawaarida halbeegga ah, ee loogu talagalay 1hp qiimaha gawaarida hal wajiga ah, Hel heshiiska ugu fiican ee Marxaladda Marxaladda Halbeegga ah / Asynchronous General Ujeeddada Gawaarida Korontada ee Shiinaha oo ka socda Shiinaha. Xawaareyaasha Xawaaraha ee Isbedelaya, Is haysta, Heerarka Caalamiga ee 'AC Gear Motors'.
New 2 HP Electric Motor 56C Single Wajiga TEFC 115/230 Volt 3450 RPM. hal weji muruq ah oo kuxiran aluminium iyo kan kale ee naxaasta ah, Iibso qiimo hooseeya, mooto tayo sare leh oo hal weji ah oo leh maraakiibta adduunka oo dhan KADIB NER GROUP. Dhoofsi Dhoofi Wejiga AC ee Wejiga AC - 90W-120W Saddex / Hal Kaliya AC Induction matoorka, Single Wareega oo wata Xawaaladda Garabka Midig, 60W Saddex Weji AC Helical Inline Geared Motor.
Marxalada hal-wejiga ah ee AC
Waxaa jira seddex nooc oo matoorro induction ah. Mashiinka Wajiga 'Split Phase Motor' waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Motor Start Resistance'. Motors A Capacitor Start Motors waa hal waji Induction Motor oo ka shaqeeya kaabaroor wareegga wareejinta kaabayaasha si loo soo saaro farqi weyn oo waji ah oo u dhexeeya kan hadda ku jira kan ugu weyn iyo windings kaaliyaha.
0.5 hp gawaarida korontada ku shaqeeya, mootada halbeegga ah oo leh gearbox dhimis, aaladda korontada ku shaqeysa oo leh xakamaynta xawaaraha, ac gear motor 100 rpm, qiimaha gawaarida gawaarida 1/2 hp, mashiinka indho-indheynta hal wajiga ah ee leh gearbox, 1/2 hp dc qalabka gawaarida, hal waj matoor wata gear. Mashiinnada induction-ka ee 'AC induction Motors' ayaa ku habboon hawlgallada uni-jihada iyo joogtada ah sida nidaamka gudbiyaha. 1/2 HP Awoodda Awoodda Xajmiga leh ee Xajmiga 'AC Gear Motors' oo laga heli karo noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo u dhexeeya 15 illaa 627 in-lbs labada xagal midig iyo qaabab isdabajoog ah ayaa ka muuqda waxtarka ka sarreeya hypoid ama qalabka geel halka ay siinayaan waxsoosaar xoog leh oo weyn kala duwan ee codsiyada.
Gawaarida 'AC gear motor' oo leh xawaare xakameyn
Motors A Capacitor Start waa hal waji Induction Mashiin. Qaybta 'motor-induction-phase' ee loo yaqaan 'induction motor induction' waxaa la siiyaa hawo bilow ah. Nidaam laba-waji ama hal-waji ah oo saddex-silig ah waa nooc ka mid ah qaybinta awoodda korantada ee hal waji ah. Mashiinka soo-kicinta wejiga-wajiga ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa culeysyo yaryar.
Xakamaynta ayaa ku habboon codsiyada kal-ka-shaqeynaya AC-ga ee u baahan xawaare isbeddel ah, xawaareyn la xakameynayo iyo dib-u-dhigista。 AC Speed ​​Control Motors laga bilaabo 6w illaa 120w, awood sare oo isbarbar-socda Shaft gawaadhida, Xakamaynta Xawaaraha 110V 120W ee AC Gear Motor, baaxaddani waa keliya lagu heli karo Marxaladda Keli ah, waa xawaare lagu hagaajin karo koontaroolka PWM (Pulse Width Modulating). Nooca Biriigga elektromagnetic ee howlaha toosan ama usheeda dhexe wareega.
Eeg Dhammaan Alaabada
Nala Wada Shaqeynta
Waxaan u qaadanaa tayo ahaan sida faa iidadeena oo sicirka ugu hooseeyaana waa daacadnimo.